Paradise Cruise Line Grand Classica Grand Bahamas Island မှပြန်လာသောသတင်းသည်အောင်မြင်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » ဘဟားမား Breaking News » Paradise Cruise Line Grand Classica Grand Bahamas Island မှပြန်လာသောသတင်းသည်အောင်မြင်သည်
ဘဟားမား Breaking News • နိုင်ငံတကာသတင်းများ • ကာရစ်ဘီယံ • ဒီလိုမြင်ကွင်း • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • သတင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး • ခရီးသွား Destination Update ကို • သတင်းမျိုးစုံ
၁၆ လကြာဆိုင်းငံ့ပြီးနောက် Bahamas Paradise Cruise Line သည်မကြာသေးမီကသူမ၏ပထမဆုံးခရီးသည်များကို Florida, Palm Beach တွင်တင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းနောက်စစ်ဆင်ရေး၏ပထမလပြည့်နှစ်ပတ်လည်နှင့်အတူ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
မိသားစုပိုင်နှင့်လည်ပတ်နေသောအပျော်စီးသင်္ဘောလိုင်း၏အထင်ကရရေယာဉ်၊ Grand Classicaဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် Palm Beach ဆိပ်ကမ်းမှရွက်လွှင့်ခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် Grand Bahama Island သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးလိုင်း၏လူကြိုက်များသောနှစ်ည "micro-cation" အပျော်စီးအပန်းဖြေခရီးများပြန်ရောက်ခဲ့သည်။
Ian Rolle၊ ဥက္ကဌ၊ Grand Bahama Island ခရီးသွားလုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်သော Viva Wyndham Fortuna Beach နှင့် Grand Lucayan တို့ကမ်းလှမ်းသောထုတ်ကုန်၏အောင်မြင်မှုအချို့ကိုဖော်ပြသည်။ “ အခုဆိုရင်အပျော်စီးသင်္ဘောလိုင်းတွေပြန်စပြီဆိုတော့ခရီးသွားတွေက Bahamas နဲ့ Viva Wyndham Fortuna Beach နဲ့ Grand Lucayan ကိုပြန်ရမယ့်အခွင့်အလမ်းအတွက်ပိုပြီးယုံကြည်မှုပိုရှိပြီးစိတ်လှုပ်ရှားခံစားနေရတယ်” ဟုသူကဆိုသည်။ ခရီးသည်များအတွက်အလုံခြုံဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုသေချာစေရန်ထားရှိသည့်ပရိုတိုကောများရှိသည်။
Marco Gobbi, Viva Wyndham Fortuna Beach Resort, Meshell Britton, Grand Bahama Island Tourism Board, Chrisanne Aston, Bahamas ၏ရနံ့
အပျော်စီးသင်္ဘောလိုင်း၏ကုန်သွယ်ရေးအရာရှိချုပ် Francis Riley ကသဘောတူသည်။ “ အဖွဲ့သားအားလုံး ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ဆေးထိုးထားပေမယ့်လောလောဆယ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့ဧည့်သည်တွေရောလက်ခံနေတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်မစတင်မီကြိုတင်စမ်းသပ်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ တင်းကျပ်သော protocols များကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်လုံခြုံပြီးသန့်ရှင်းသော onboard အတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန်အလို့ငှာဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စတွင်ဧည့်သည်သည်စားသောက်ခြင်း မှလွဲ၍ သင်္ဘောအတွင်းပိုင်းနေရာအားလုံး၌မျက်နှာဖုံးများကို ၀ တ်ရမည်။ ရေကူးကန်၊ အပြင်ထမင်းစားခန်း၊ ဘားများစသည့်ပြင်ပနေရာများတွင်နှာခေါင်းစည်းများမလိုအပ်ပါ” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ခရီးသည်များနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းများအားလုံး၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန် Bahamas Paradise Cruise Line သည်ကျယ်ပြန့်သောသန့်ရှင်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး CDC ၏ Conditional Sailing Order အရဖော်ပြထားသည့်မူဝါဒများအားလုံးကိုလိုက်နာသည်။ စီအီးအို Oneil Khosa ၏အဆိုအရ“ သင်္ဘောပေါ်မှဧည့်သည်များသည်သန့်ရှင်း။ လုံခြုံစိတ်ချရသောပျော်ရွှင်စရာအိမ်သို့ Bahamas အားလပ်ရက်အပျော်ခရီး၊ အပြန်ပြန်နှစ်ညအသွားအပြန်အပျော်စီးလှေများဖြင့်ပြည့်နိုင်သည်။
ရပ်နားစဉ်ကာလအတွင်းဘဟားမားစ်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း၏လေ့ကျင့်ရေး ဦး စီးဌာန၊ အထူးသင်တန်းအစီအစဉ်များသည်ဧည့်သည်၏ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံမှုကိုတင်းကျပ်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အထူးသင်တန်းအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အပျော်စီးသင်္ဘောလိုင်းပြန်တက်လာမှုကိုမျှော်လင့်ရင်း Grand Bahama Island Tourism Board ၏အဖွဲ့ဝင်များသည်အလားအလာရှိသောဧည့်သည်များကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
Viva Wyndham Fortuna Beach Resort ၏ General Manager ဖြစ်သူ Marco Gobbi က“ ငါတို့အတွက်ဒီအရေးကြီးတဲ့လက်တွဲဖော်ပြန်လာတာကိုငါတို့ဝမ်းသာတယ်။ Day-pass packages များတိုးပွားလာသည်ကိုငါတို့တွေ့ရသည်၊ ငါတို့ Cruise and Stay 'အစီအစဉ်ကြောင့် ၁၀% ၀ န်းကျင်တိုးလာသည်။ ၎င်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာနေထိုင်ရန်ထိန်းသိမ်းရန်ရုန်းကန်နေသောကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအတွက်ကြီးမားသောအကူအညီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကလေကောင်းလေသန့်ရှူထုတ်တာနဲ့တူတယ်။ ” Gobbi ကထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်မှာ“ Grand Classica သည် pre-covid စီးပွားရေးအဆင့်များမကြာမီပြန်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားကြိုတင်မှာယူမှုအချို့အဆင့်သို့ရောက်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းသည်လာမည့် low season (စက်တင်ဘာလမှဒီဇင်ဘာ) အတွင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်လက်ဖွင့်ထားရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ”
ဧည့်သည်များအတွက်ပြန်လည်ကြိုဆိုမှုအတွေ့အကြုံကိုပိုမိုမြှင့်တင်ရန် Grand Bahama Island ခရီးသွားလုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့သည် Bahamas of Fragrance of the Perfume Factory နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဧည့်သည်များအတွက်လက်သန့်ဆေးရည်ထုတ်လုပ်ရန်ထုတ်လုပ်သည်။ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းဆေးရည်တွင်အရက် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းပါ ၀ င်ပြီးအရေပြားအပေါ်ယံကိုထိရောက်စွာသန့်စင်ပေးပြီးပိုးမွှား ၉၉.၉% ကိုသေစေသည်။ ပိုးသတ်ဆေးများသည် 75ml / 99.9 fl လက်မှတ်ရအပူပိုင်းရနံ့နှင့်ထူးခြားသောပါးလွှာသော credit card ပုံသဏ္withာန်ရှိသော oz misting spray သည်သင်၏ကျောပိုးအိတ်ထဲသို့သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
အလားအလာရှိသောခရီးသွားများသည်ရွက်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများအတွက် Cruise Line ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ သွား၍ Grand Bahama Island သို့သူတို့၏ခရီးစဉ်ကိုကြိုတင်မှာကြားရန်တိုက်တွန်းထားသည်။
https://www.bahamasparadisecruise.com/sailing-procedures.php အထူးကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ပရိုမိုးရှင်းမျိုးစုံကိုလည်းယခုရနိုင်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များအတွက် (သို့) အပျော်စီးဘွတ်ကင်လုပ်ရန်လာရောက်ပါ www.BahamasParadiseCruise.com/မရ။ Bahamas Paradise Cruise Line ကို Facebook တွင်သွားပါ Facebook.com/BPCruiseLine, Instagram ကို @BahamasParadiseCruiseLineနှင့်တွစ်တာ @BPCruiseLine.
Grand Bahama Island သို့ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ www.grandbahamavacations.com .
Grand Bahama Island Tourism Board အကြောင်း
Grand Bahama Island ခရီးသွားလုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့ (GBITB) သည်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ marketing စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်မြှင့်တင်ရေးအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည် Grand Bahama ကျွန်းမရ။ Grand Bahama Island ရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်ပံ့ပိုးရန် GBITB သည်တာဝန်ရှိသည်။
လှုပ်ရှားမှုများတွင် Grand Bahama ကျွန်း၏စျေးကွက်အတွင်းပိုမိုသိရှိနားလည်မှုနှင့်အဆင့်အတန်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာအစပျိုးမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုတို့ပါဝင်သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်များတွင်နေရာထိုင်ခင်းကဏ္ businesses၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အရက်ဆိုင်များ၊ ဆွဲဆောင်မှုများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပံ့ပိုးသူများ၊
IMEX အမေရိကတွင် စမတ်ကျသော တနင်္လာနေ့- သူငယ်ချင်းဟောင်းများ ပြန်လည်ဆုံဆည်းခြင်း။
ဆော်ဒီအာရေဗျရှိ Apple Store ရှိ နံပါတ်တစ် မိုဘိုင်းအက်ပ်